Ndiani Musoro weZvapupu zvaJehovha? | Bhuku Regore ra2015
Rugwaro Rwegore rwa2015
Basa Riri Kufamba Chaizvo kuWarwick
Dhipatimendi Rinoona Nezvemapurani Nokuvaka Pasi Rose
Bhaibheri Rakagadzirwa Kuti Rigare Kwenguva Refu
Kuungana kweZvapupu zvaJehovha Kukuru Kupfuura Kumwe Kwose
Kutsaurirwa Kwebazi remuSri Lanka
“Taona Zvinhu Zvinoshamisa”
Zvakaita Dominican Republic
Vakasungwa Uye Vakabhanwa
Kuparidza Kunoenderera Mberi
Vakasunungurwa, Ndokubhanwa Zvakare
Trujillo Nechechi yeRoma
Kurwiswa Zvine Utsinye
Kutsungirira Kwakaita Kuti Vave Vakasununguka
“Tariro yeUmambo Hakusi Kungorota”
“Ndicharamba Ndiri Mumwe weZvapupu zvaJehovha”
Zvicharamba Zviri Muno
Vamwe Vaparidzi Vari Kudiwa
Vanoda Hama Dzavo
Zvii Zvakaitwa Nemhaka Yekuwedzera Kwaiitika?
Ndima yeHaitian Creole
Kudengenyeka Kwenyika muHaiti
Jehovha Akavhura Mwoyo Yevakawanda
Vanhu 22 Vakabuda Muchechi
Mupanduki Aisatenda Kuti Kuna Mwari Ava Mushumiri waMwari
Matsi Yekutanga Kugamuchira Chokwadi
Kuwana Chinangwa Muupenyu
Ndakafunga Kusiya Zvekushumira Mwari
Makore Zana Apfuura—1915
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Arabic Armenian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra2015
‘Siyai Sangano Ravo Risisina Musoro’
Musi wa13 July 1957, Colón akanyorera munyori wehurumende achiti: “Pane chirevo chekare chinozivikanwa zvikuru chinoti: ‘Kuti uuraye nyoka, irove musoro.’ Danho guru rekuti tiparadze zvachose kapoka keZvapupu zvaJehovha munyika muno nderekudzinga mamishinari avo. Kuita izvozvo kunoita kuti sangano ravo risare risisina musoro, uye kana zvadaro zvirongwa zvavo hazvizobudiriri.”
Papera nguva pfupi, mukuru mukuru aiona nezvekuchengeteka kwenyika ainzi Arturo Espaillat akarayira kuti mamishinari gumi ainge asara munyika yacho abude. Musi wa21 July 1957, Roy Brandt akanyorera Trujillo tsamba achikumbira kuti vaonane kuti amutsanangurire zvatiri. Mutsamba yake akanyorawo kuti, “Zviri kuitwa nevamwe vanhu munyika muno vachirwisa zita raJehovha Mwari zvakangofanana nekurwiswa kwakaitwa vaapostora vaJesu nevanhu vakanga vaudzwa zvisiri izvo.” Hama Brandt vakakurudzira Trujillo kuti averenge Mabasa chitsauko 2 kusvika ku6 ndokutsanangura kuti, “Zano rakanaka rakapiwa neMutongi Gamarieri asingatendereri panguva iyoyo richiri kungoshanda sezvaraiita kare ikako.” Hama Brandt vakanyora nemabhii makuru mashoko aMabasa 5:38, 39: “REGAI VANHU AVA VAKADARO NOKUTI KANA BASA RAVARI KUITA RICHIBVA KUNA MWARI, RIMWE ZUVA MUCHAZOONA KUTI MURI KURWA NAMWARI.” Asi Trujillo akaisa zvimiti munzeve. Musi wa3 August 1957, mamishinari akaendeswa kunhandare yendege achibva abudiswa munyika yacho.
‘Jesu Ndiye Musoro’
Donald Nowills aitungamirira basa pabazi aine makore 20 chete
Chii chaizoitika kuhama nehanzvadzi dzemunyika yacho mamishinari zvaakanga aenda? Vaizosara ‘vasina musoro’ here sezvaifungwa naColón? Kwete, Jesu “ndiye musoro womuviri, iyo ungano.” (VaK. 1:18) Saka vanhu vaJehovha vaiva muDominican Republic havana kusara ‘vasina musoro.’ Asi, vakaramba vachitungamirirwa naJehovha nesangano rake.
Donald Nowills, uyo akanzi atungamirire basa pabazi panguva yakaenda mamishinari, aingova nemakore 20 chete ekuberekwa uye ainge ava nemakore 4 chete abhabhatidzwa. Kunyange zvazvo akanga amboshanda semutariri wedunhu kwemwedzi mishoma, basa raakapiwa pabazi raiva idzva kwaari. Hama Nowills vaiva nekahofisi mumba mavo kainge kakagadzirwa nemapuranga, denga racho riri remarata, kaine uriri husina simendi. Imba yacho yaiva muGualey, nzvimbo ine ngozi zvikuru muCiudad Trujillo. Vaiprindira nyika yose Nharireyomurindi vachibatsirwa naFélix Marte.
Nharireyomurindi ya1958 yakaprindwa nemimeograph
Mary Glass aibatsira Hama Nowills, uye panguva iyoyo murume wake Enrique ainge akasungwa. Mary Glass anoti: “Ndaibva kubasa kwangu na5:00 manheru ndoenda kuhofisi kwaHama Nowills kunotaipa Nharireyomurindi. Hama Nowills vaizoprinda mamwe magazini eNharireyomurindi yacho nemuchina wakaita setapureta. Zvadaro, imwe hanzvadzi yaibva kuSantiago, yaishevedzwa kuti ‘ngirozi,’ yaizoisa magazini acho nechepasi pegaba re20l yemafuta risina chinhu. Yaibva yavhara magazini acho nejira, pamusoro yoisa mufarinya, mbatatisi, kana kuti madhumbe, yozvivhara zvose nesaga. Yaibva yakwira zvifambiso zvevoruzhinji yakananga kuchamhembe kwenyika yacho yosiya magazini imwe chete paungano imwe neimwe. Mhuri dzaiita majana ekukumbira Nharireyomurindi yacho kuti vaidzidze pamwe chete.”
Mary anoti: “Taifanira kunyatsongwarira, sezvo vanhu vehurumende vairamba vachifamba-famba vachiedza kuona kuti Nharireyomurindi yaiprindirwa kupi. Asi havana kumbobvira vazvibata. Jehovha aigara achitichengetedza.”